Marcus Garvey: Baba veAfrican Unity of Peoples - Afrikhepri Fondation
Chitatu, kubvumbi 21, 2021
Marcus Garvey: Baba vemuAfrica Kubatana Kwevanhu
Marcus Garvey (1887-1940) ndomumwe wemagamba enyika yenyika yeJamaica. Dziviriro huru yezvakakonzera vatema. Akashanyira Central America, Brazil, United States ... kwese kwese airatidza mamiriro ezvinhu evatema. Muna 1914, akavamba Universal Negro Improvement Association neAfrican (UNIA), yekutanga nyika dzakawanda kurwira kushandirapamwe mukuvandudzwa kwevakawanda vatema. Mahofisi ayo makuru akaendeswa kune makore maviri akazotevera kuenda kuNew York.
Iye anofarira munhoroondo yeAfrica, kunyanya muLiberia apo vazhinji varanda vashoma vakasunungurwa nevaAmerica uye neItiopia, umambo humwe hutsva huchiri hwakasununguka. Iye ndiye anokurudzira sangano re "Back to Africa" ​​rakagadzirwa mumakore e1920. Zvisinei, kutaura kwake kusimbisa kuparadzana pakati pevatema nevatsvene hakubvumirane pakati pevatungamiri vemavara.
Muna 1916, akazivisa kuti mambo mutema achakurumidza kugadzwa muAfrica uye kuti achashanda achitsigira vatema. Pfungwa iyi ndiyo inotevera, mambo weEthiopia, Ras Tafari, achadomwa semununuri wevanhu vatema uye anozozvarwa chiRastafarianism.
“Marcus Garvey mutema akazvarwa muJamaica muna 1887, makore maviri mushure mekongiresi yeBerlin uko Europe inopatsanura Africa uye mumazuva ekupedzisira ehuranda hwevatema veBrazil kana veCuba.
Kubva kuKingston (Jamaica) kuenda kuNew York, London, Paris kana Geneva, panguva yake isina kuneta peregrinations, Garvey aive bhodhi rairira zvekutyisa kwevanhu vatema, vakadzoserwa kuAmerica kana kukoloniwa pavhu ravo nevaEurope. Akadzivirirwa kana kurambidzwa kugara, nevekoloniyalisiti kana vechisarura nyika, iyo West Indian, Marcus haana kuzombokwanisa kutsika muAfrica. Akafira muLondon, mukutambudzika.
Hupenyu hwake uye kufunga kwaMarcus Garvey zvakange zvakazvipira chose kusunungurwa kwevanhu vatema. "
Akafira muLondon muna 1940, akakanganwa nevose. Madota ake akaendeswa ku1964 muJamaica apo akazova hero yechizvarwa.
Marcus Garvey: Baba vekubatana kweAfrica kwevanhu Vhoriyamu 1 - Hupenyu hwake, kufunga kwake, zvaakaita
4 nyowani kubva ku € 28,95
6 yakashandiswa kubva ku11,94 €
Tenga € 28,95
Mharidzo kune vanhu: Iyo Africa Philosophy Course
2 nyowani kubva ku € 20,29
2 yakashandiswa kubva ku44,64 €
Tenga € 20,29
Kusunungurwa Kubva Pfungwa dzeVaranda: Mashoko Akasarudzwa aMarcus Garvey
3 nyowani kubva ku € 5,64
Tenga € 5,64
Iyo Philosophy & Pfungwa dzaMarcus Garvey, kana Africa yevaAfrica (Chirungu Chinyorwa)
Tenga € 10,17
Philosophy nemaPfungwa aMarcus Garvey [Vhoriyamu I & II mune Rimwe Vhoriyamu]
9 nyowani kubva ku € 29,18
2 yakashandiswa kubva ku33,41 €
Tenga € 29,23
Marcus Garvey akatsanangurira vayaruka
1 yakashandiswa kubva ku26,77 €
Tenga € 12,17
Mharidzo Kune Vanhu
2 nyowani kubva ku € 12,62
1 yakashandiswa kubva ku25,05 €
Tenga € 12,62
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Kubvumbi 21, 2021 9:40 PM
Sununguka Kwaunenge Uri - Thich Nhat Hanh (Audio)
Kupfuura kuputika kwemaoko, hondo inoparadza mweya
Tarisa Manhattan Lockdown (2019)